Alert Virus = Diso tsara - Rikoooo
Alert Virus = diso tsara
Vitsy ny mpikambana nitatitra viriosy na fandrahonana toy ny sivana "Smart Screen - ity programa ity mety hanimba ny solosainao" sy ireo fampitandremana hafa amin'ny rakitra sasany.
AZO AMPIANA AZO ATAO A FAHADISOANA FALSE
Nanao fanadihadiana lava momba izany izahay, nanamarina ary nodinihina imbetsaka ny tranokalan'ny tranokala fahasamihafan'ny anti-virtoaly fandaharana ary tsy nahita na inona na inona, ny antontan-taratasy rehetra dia madio.
Indraindray gadra fandaharana mitovy algorithm flanges tao amin'ny fandaharana ara-pahasalamana toy ny amin'ny fandaharana niparitaka be.
Noho izany dia antsoina hoe "positive false" izany, amin'ny teny hafa, ny fahadisoana ataonao dia mahatonga ny fahadisoana, mino izy fa hanaiky sonia. TSY MISY TONGA IANAO ...
Hamorao ny rindrambaiko anti-virus! Ny olana dia mety hamaha ny tenany rehefa misy fanavaozana. Aza Norton Antivirus ary avast izay iharan'ny lozam-pifamoivoizana diso.
Ampiasao virosy mahery vaika tsy dia mitaona loatra, manoro hevitra izahay BitDefender saingy misy maro hafa.
Raha tsy te-hanova ny anti-virosy, dia afaka mankarary azy fotsiny ny fotoana télécharger sy hametraka ny no add-ons.